I-Sono-Electrochemical Synthesis yamaNanoparticles
Ukuhlanganiswa kwe-nanoparticles ngama-nanoparticles kukhuthazwa nge-ultrasonically kuyindlela esebenza kahle kakhulu futhi engabizi kakhulu ukukhiqiza ama-nanoparticles aphezulu kakhulu. I-sono-electrochemical synthesis, eyaziwa nangokuthi i-sonoelectrodeposition, ivumela ukulungisa ama-nanostructures wezinto ezahlukahlukene nobubunjwa.
I-Sonoelectrochemical Synthesis ne-Sonoelectrodeposition ye-Nanoparticles
I-Sonoelectrochemical synthesis noma i-sonoelectrodeposition inqubo esetshenziselwa ukukhiqiza ama-nanoparticles ensimbi asebenzisa amandla amakhulu e-ultrasound ngesikhathi senqubo ye-electrodeposition ngenhloso yokukhuthaza ukudluliswa okukhulu kwama-nanoparticles akhulayo ebusweni be-cathode nakwisixazululo esizungezile.
Okwe-sonoelectrochemical synthesis noma i-sonoelectrodeposition yama-nanoparticles, imiphumela ye-sonochemistry ihlangene nenqubo ye-electrodeposition. Imiphumela ye-sonoelectrochemical yamagagasi anamandla e-ultrasound kanye ne-acoustic cavitation evelayo ekuphendukeni kwamakhemikhali kubangelwa amazinga okushisa aphakeme kakhulu, izingcindezi, kanye nokwehluka kwazo, okukhula ngaphakathi nangaseduze kwamabhamuza e-cavitation awayo. Ngokuhlanganisa i-sonochemistry ne-electrochemistry, ukunikezwa kwe-sonoelectrochemistry kuhlanganyele nemiphumela enjalo kuthuthukisa ukudluliswa kobuningi, ukuhlanzwa kwendawo kwamakhemikhali e-electrode, ukukhipha isixazululo, kanye namazinga okuphendula okwandayo. Sekukonke, i-sonoelectrochemical nanoparticle synthesis (sonoelectrodeposition) idlula ngokuvunwa okuphezulu kwama-nanoparticles asezingeni eliphakeme, angakhiqizwa ngaphansi kwezimo eziphansi ngenqubo esheshayo futhi engambi eqolo. Izinqubo zenqubo ye-sonoelectrochemistry kanye ne-sonoelectrodeposition zivumela ukuthonya usayizi wezinhlayiyana kanye ne-morphology.
I-electrode ye-Sonoelectrochemical ye-nanoparticle synthesis (i-sonoelectrodeposition)
Izinzuzo zeSonoelectochemical NP Synthesis
Kusebenza kahle kakhulu
Kusebenza ezintweni eziningi nakwizakhiwo
Inqubo "yebhodwe elilodwa"
ephephile futhi kulula ukusebenza
Isebenza kanjani iSonoelectrochemical Synthesis / Sonoelectrodeposition?
Ukusetha okuyisisekelo kohlelo lwe-sonoelectrodeposition lwe-sonoelectrochemical nanoparticle synthesis kulula kakhulu. Umehluko kuphela phakathi kokusetha kwe-sonoelectrodeposition kanye nokusethwa kwe-electrodeposition iqiniso lokuthi kuma-electrode e-sonoelectrodeposition system probe (s) asetshenzisiwe. Uphenyo lwe-ultrasonic lusebenza njenge-electrode esebenzayo yokuhlanganisa ama-nanoparticles ensimbi. Omunye wemiphumela emikhulu yokushayela kwe-ultrasound ku-sonoelectrodeposition ukwenyuka kokudluliswa kwesisindo phakathi kwe-electrode (cathode kanye / noma i-anode) nesisombululo esizungezile.
Njengoba izinqubo zenqubo yokuhlanganiswa kwe-sonoelectrochemical kanye ne-sonoelectrodeposition zingalawulwa ngokunembile futhi zilungiswe, ama-nanoparticles osayizi alawulwayo nomumo angahlanganiswa. I-Sonoelectrochemical syntheis kanye ne-sonoelectrodeposition kuyasebenza ezinhlotsheni eziningi ze-metallic nanoparticles nezakhiwo ze-nanostructured.
Izinzuzo zeSonoelectrochemical Nanoparticle Synthesis
Iqembu locwaningo le-NTNU likaProf. Islam noProf. Pollet baphinde baqala endatshaneni yabo yocwaningo (2019) izinzuzo ezinkulu zokukhiqizwa kwe-sonoelectrochemical of nanoparticles ngokulandelayo: , futhi kwesinye isikhathi indlela yokuphendula kwe-electrochemical, (ii) ukuguqulwa kwe-surface morphology ngokusebenzisa i-cavitation jets ku-interface ye-electrode-electrolyte, imvamisa edala ukwanda kwendawo futhi (iii) nokuncipha kobubanzi besendlalelo se-electrode ukuncipha kwe-ion. ” (Islam et al. 2019)
Izibonelo Zama-Nanoparticles ahlanganiswe ngempumelelo nge-Sonoelectrochemical Route
i-alloy ne-semiconductor nanopowders
ithusi (Cu) ama-nanoparticles (ama-NPs)
I-Tungsten-cobalt (W-Co) ingxubevange yama-NP
zinc (Zn) ama-nano-complexes
igolide (Au) nanorods
i-ferromagnetic Fe45Pt55 Ama-NPs
i-cadmium telluride (CdTe) amachashazi we-quantum (QDs)
ama-nanorods okuhola (PbTe)
i-fullerene-like Molybdenum disulfide (MoS2)
ama-nanoparticles we-polyaniline (PA)
i-poly (N-methylaniline) (PNMA) eqhuba i-polymer
polypyrrole / multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) / chitosan nanocomposites
Ama-probe wamaprosesa we-ultrasonic I-UIP2000hdT (2000 watts, 20kHz) yenza njengama-electrode we-sonoelectrodeposition of nanoparticles
Ama-Electrochemical Probes asebenza kakhulu
I-Hielscher Ultrasonics ingumlingani wakho wesikhathi eside onolwazi wezinhlelo eziphezulu ze-ultrasonic ku-sonochemistry kanye ne-sonoelectrochemistry. Sakha futhi sisabalalisa ama-probe e-state-of-the-art ultrasonic kanye nama-reactors, asetshenziselwa umhlaba wonke ekusetshenzisweni komsebenzi onzima ezindaweni ezifuna kakhulu. Nge-sonoelectrochemistry kanye ne-sonoelectrodeposition, i-Hielscher ithuthukise ama-probe akhethekile e-ultrasonic, ama-reactors kanye nama-insulators, Ama-probe e-ultrasonic asebenza njenge-cathode kanye / noma i-anode, ngenkathi amaseli we-reactor ehlinzeka ngezimo ezifanele zokuphendula kwe-electrochemical. Ama-electrode e-Ultrasonic namaseli ayatholakala kuma-galvanic / voltaic kanye nezinhlelo ze-electrolytic.
Onke ama-processor we-Hielscher ultrasonic alawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela anokwethenjelwa amahhashi omsebenzi ku-R&D nokukhiqizwa. I-amplitude ingenye yezinqubo ezibalulekile zenqubo ezithonya ukusebenza kahle nokusebenza kwe-sonochemically ne-sonomechanically reaction. Zonke Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa avumela ukumiswa okuqondile kwe-amplitude. Amaprosesa aseHielscher ezimboni ze-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu futhi ahambise ukuqina kwe-ultrasonic okudingekayo kokufuna i-sono-electrochamical applications. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7.
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwamapharamitha wenqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunikeza ithuba lokuthonya ukusabela kwe-sonoelectrochemical ngokunembile. Ngesikhathi ngasinye sokusebenza kwe-sonication, wonke amapharamitha we-ultrasonic arekhodwa ngokuzenzekelayo ekhadini le-SD elakhelwe ngaphakathi, ukuze ukugijima ngakunye kuhlolwe futhi kulawulwe. I-sonication efanelekile yokuphendula okuhle kakhulu kwe-sonoelectrochemical!
Yonke imishini yakhelwe ukusetshenziswa kwe-24/7/365 ngaphansi komthwalo ogcwele futhi ukuqina nokuthembeka kwayo kuyenza ihhashi lomsebenzi enqubeni yakho ye-electrochemical. Lokhu kwenza imishini ye-ultrasonic ye-Hielscher ithuluzi lomsebenzi elinokwethenjelwa eligcwalisa izidingo zakho zenqubo ye-sonoelectrochemical.
Njengebhizinisi eliphethwe ngumndeni neliphethwe ngumndeni, i-Hielscher ibeka phambili amazinga aphezulu ekhwalithi yamaprosesa ayo e-ultrasonic. Onke ama-ultrasonicators aklanyelwe, akhiqizwa futhi ahlolwa kahle ekomkhulu lethu lasekhaya eTeltow ngaseBerlin, eJalimane. Ukuqina nokuthembeka kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuyenza ihhashi lomsebenzi ekukhiqizeni kwakho. Ukusebenza okungu-24/7 ngaphansi kokulayishwa okugcwele futhi ezindaweni ezifunayo kuyisici semvelo samaprosesa aphezulu we-ultrasonic nama-reactors.
Xhumana nathi manje futhi usitshele ngezidingo zakho zenqubo ye-electrochemical! Sizokuncoma ama-electrode e-ultrasonic afaneleka kakhulu kanye nokusethwa kwesikhungo
Uphenyo lwe-ultrasonicator I-UIP2000hdT isebenza njenge-electrode kusethaphu ye-sonoelectrochemical ye-nanoparticle synthesis.
Ukusetha kwe-Sonoelectrochemistry – 2000 Watts Ultrasound
I-Sono-Electrochemistry kanye Nezinzuzo zayo
I-Sonoelectrolytic Hydrogen Production evela ku-Dilute Sulfuric Acid
Electro-Sonication – Ama-electrode e-Ultrasonic